Nidaamka Badbaadinta Macluumaadka Guud -
CompanyHub & Xeerka Guud ee Ilaalinta Xogta
Bishii Maajo 25, 2018, sharci cusub oo khuseeya asturnaanta loo yaqaan "General Data Protection Regulation" (GDPR) ayaa wax ku ool ah Midowga Yurub (EU). GDPR waxay ballaarisaa xuquuqda gaarka ah ee shakhsiyaadka Midowga yurub iyo meelo ka saaraan waajibaadyo cusub oo ku saabsan dhammaan ururada suuqyada, jihada, ama haya macluumaadka shakhsiyeed ee Midowga Yurub. Sidee tani saameyn doontaa shirkaddaada?
Waa maxay GDPR?
GDPR waa sharciga cusub ee ilaalinta xogta (oo laga yaabo in May 25, 2018) ee Midowga Yurub ee xoojiya ilaalinta xogta shakhsi ahaaneed iyada oo loo eegayo horumarinta farsamada casriga ah, kobcinta kobcinta, iyo xogta caalamiga ah ee adag ee xogta shakhsi ahaaneed. Waxay cusboonaysiisaa oo beddeshaa shuruucda ilaalinta xogta qaranka ee hadda jira iyada oo leh xeerar keliya, si toos ah loogu dhaqangalin karo waddan kasta oo xubin ka ah Midowga Yurub.
Muxuu GDPR sharciyeynayaa?
GDPR waxay xakameysaa "falanqaynta" macluumaadka ee shakhsiyaadka Midowga yurub, oo ay ku jiraan ururinta, kaydinta, bedelka, ama isticmaalka. Urur kasta oo hirgeliya xogta shakhsiyadeed ee shakhsiyaadka Midowga yurub waa mid ka mid ah qaanuunka sharciga, iyada oo aan loo eegin haddii ururku uu jir ahaan joogitaan ahaan u joogsado EU. Muhiimad ahaan, hoosta GDPR, fikradda "xogta shakhsiyadeed" waa mid aad u ballaaran waxayna daboolaysaa wixii macluumaad ah ee la xidhiidha shakhsi la aqoonsaday ama la garan karo (oo sidoo kale loo yaqaan "mawduuc xog ah").
Miyuu GDPR u baahan yahay xogta shakhsi ee Midowga Yurub si uu u joogo EU?
Maya, GDPR uma baahna xogta shakhsiyadeed ee EU-da si ay u joogsato Midowga Yurub, mana ku dhejiso xayiraado cusub oo ku saabsan wareejinta xogta shakhsiga ah ee ka baxsan Midowga Yurub.
Shirkadda shirkadda HUB GDPR
Ururada ayaa si isa soo taraysa u fahmaaya muhimadda amniga macluumaadka - laakiin GDPR waxay kor u qaadeysaa bararka. Waxay u baahan tahay in ururrada ay qaadaan tallaabooyin farsamo iyo hab ururin si ay u ilaaliyaan xogta shakhsiyeed ee lumitaanka ama helitaanka oggalaansho ama bandhigid. Waxaan ilaalineynaa kaabayaasha iyo xogta user.
Kaabayaasha ku habboon GDPR
Nabadgelyada Heerka Sare
Nabadgalyada Heerka Sare
CompanyHub waxaa lagu dhisayey nabadgelyo si loo ilaaliyo macluumaadkaaga iyo codsiyadaada. Waxaad sidoo kale hirgelin kartaa qorshahaaga amnigaaga si aad u muujiso qaabka iyo baahiyaha ururkaaga. Ilaalinta xogtaada waa mas'uuliyad wadajir ah oo adiga iyo shirkadda shirkadda ah. Shirkadaha shirkadda HUB waxay awood u siineysaa inaad awood u siisid isticmaalayaashaada si ay u gutaan shaqadooda si nabad ah. Nidaamyada amniga ee kala duwan waa sida hoose:
CompanyHub waxay isticmaashaa Amazon EC2, RDS, S3 kuwaas oo horey u sheegay GDPR waafaqsan Amazon oo leh xeerka anshaxa CISPE.
CompanyHub waxay u adeegsataa SSL sirta si ay u gudbiyaan macluumaadka dadka isticmaala si aan u kaydino macluumaadka nalalka. Furaha ayaa adeegsaneysa algorithm SHA256 si loo isticmaalo.
Macaamil kasta wuxuu helayaa macluumaad gaar ah shirkadda CompanyHub. Sidaa darteed, ma jirto fara-galin ama suurtogalnimada xogta macluumaadka khaldan ee macluumaadka macluumaadka ee kuwa isticmaala
Isticmaalka mansabka macaamiisha, dadka isticmaala waxaa laga xayiri karaa inay arkaan, abuurayaan, cusbooneysiinayaan ama tirtirayaan jadwalka. Ogolaanshiyaha jadwalka waxaad ku dhejin kartaa dhammaan miisaska miisaska dadka isticmaala si aan xitaa ogeyn haddii miiskaasi jiro.
Xaaladaha qaarkood, waxaad ubaahan kartaa in dadka isticmaala ay helaan miis, laakiin waxay xadidaan helitaanka goobaha shakhsiga ee miiskaasi. Nabadgelyada heer-degaanka-ama ogolaanshaha beeraha- xakamee haddii user uu arko, isbedelo, qiimaha barkeed gaar ah miiska. Waxay kuu ogolaanayaan inaad ilaaliso beeraha xasaasiga ah adigoo aanad miiska wada dhuuman.
Iyada oo la socda miisaska iyo beeraha, haddii aad rabto inaad koontaroolto diiwaangelinta, Ammaanka derejo qorista ayaa kuu ogolaanaya inaad siisid dadka isticmaalaya xogta miiska qaar, laakiin kuwa kale maahan. Diiwaanka kasta waxaa iska leh user. Milkiiluhu wuxuu heystaa fursad buuxda oo ku saabsan diiwaanka. In madaxda sare, isticmaalayaasha ka sarreeya madaxda sare marwalba ay helaan fursad isku mid ah dadka isticmaala iyaga ka hooseeya madaxda. Waxaa jira laba siyaabood oo aad sheegi karto amniga heerarka diiwaangelinta
Ururinta Wadaagista: Tallaabada ugu horreysa ee amniga heerka sare waa in la go'aamiyo dejinta wadaagista ururada. Marka la diido, diiwaanada oo dhan waa la arki karaa dhammaan dadka isticmaala urur. Waxaan isticmaali karnaa goobaha wadaagidda ururinta si aan xogta ugu dhigno milkiilayaasha iyo maamulayaasha. Ka dib markii tan la dhammeeyo, waxaad si xushmad leh u bixin kartaa diiwaanada dadka isticmaala isticmaalida meelaha kale ee ammaanka amaanka ah.
Territorial Territorial: Marka aad qeexdid goobaha la wadaagayo ururada, Waxaad isticmaali kartaa hanti-beelka dhul-beereedka si aad ugu wadaagto helitaanka xogta ballaaran. Qeyb ka mid ah dhul-beereedku wuxuu siinayaa dadka isticmaala xogta ku saleysan shuruudaha sida zip code, warshad, ama goob ganacsi oo khuseeya ganacsigaaga. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa hanti-beereed dhuleed kaas oo isticmaala "North America" ​​kaalinta xogta kala duwan marka loo eego dadka isticmaala doorka "Canada" iyo "United States".
Warbixin kasta waxaa lagu daraa faylka. Isticmaalayaasha waa la xaddidi karaa si loo eego / loo xereeyo warbixinnada qaar iyadoo la isticmaalayo wadaaga warbixinta Waxa loo oggolaan karaa ama la diidi karaa inay eegaan / rogaan warbixino.
Waxaad dooran kartaa beeraha qaar ka mid ah jaantusyada si ay ula socdaan & ula socdaan xayeysiisyada goobahaas. Isbeddelidda mid ka mid ah goobahaasi waxay ku darayaan waxqabadka aan la tirtirin ee waxqabadka miiskaas.
Xaqqa in la illoobo
Xayiraadda Xogta Macluumaadka
CompanyHub waxay ku dadaaleysaa inay kaa caawiso inaad u hoggaansanto ilaalinta xogta iyo xeerarka asturnaanta iyadoo la fulinayo ficillo kala duwan sida email-ka-bixinta iwm. Waxaan codsaneynaa oggolaansho ka hor intaan la isku qorin iwm. Waxaanu kaydinaa ogalaansho, waqtiga ogolaashaha, shuruudaha ogolaanshaha waajibaadka sharciga. Si ay u sahlanaato macaamiisheena si ay u kaydiyaan ogolaanshaha isticmaalkooda, CompanyHub waxay bixisaa ikhtiyaari si loo abuuro jadwal qaas ah si loo kaydiyo meelihii ogolaanshaha ee isticmaalayaasha. Diiwaanada ogolaashadaan waxay ku xiran yihiin diiwaanada jadwalka la doonayo.
Si loo waafajiyo ilaalinta xogta iyo sharciyada gaarka ah, mararka qaar macaamiishu waxay u baahan yihiin inay tirtiraan xogtooda shakhsiyeed.
CompanyHub waxay ka caawisaa inay hodon ka noqdaan qalabka si ay u tirtiraan macluumaadkaaga. Waxaad dooran kartaa in aad tirtirto oo aad ku hayso xogtaada sida siyaasaddayada asturnaanta ama waxaad si joogto ah u tirtiri kartaa xogta. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad sameyso ficil mar kasta oo aad tirtirto diiwaanka. Haddii macaamilku rabo inuu tirtiro xisaabtiisa oo idil, ikhtiyaar ayaa la bixiyaa si qofka isticmaala uu soo galo koodhka hubinta ee tirtira oo la tirtiro oo laga tirtiro xisaabtiisu shirkadda Fircoon sida siyaasaddayada.
Marka ay jiraan xaalado u baahan inaad sidaas samayso, ka hortag hawlgalka macaamiishaada. Waxaan ku siineynaa hagis kaa caawinaya inaad xakameyso noocyada xogta xogta. Habkaas, waad ka shaqayn kartaa inaad ku dhaqanto shuruucda muhiim u ah shirkaddaada. Waad ka dhoofin kartaa xogta shirkadda CompanyHub oo aadan rabin in lagu shaqeeyo.
Waxaa jira ikhtiyaaro kala duwan oo loogu talagalay gaarsiinta xogta. Waxaad isticmaali kartaa API-yada, Sicirada Dibedda si aad xogta uga soo qaadato faylka CSV illaa CompanyHub. Waxaad u oggolaan kartaa macaamiishaada inay dhoofiyaan xogtooda sida ku qoran xeerar kala duwan. Xogta waxaa laga soo saari karaa hababka kala duwan sida dhoofinta UI-ga, warbixinnada, REST API. Foomamka dhoofinta waxaa ka mid ah JSON iyo CSV.
Intaa waxaa dheer, our Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxay bixisaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sirtaada, xogta aan ururinno, sida aan u isticmaalno. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, waxaad nala soo xiriiri kartaa adigoo kaashanaya taageerada www.companyhub.com.